Diyaaradda Rakaabka ee Airbus oo loo beddelay Gaadiidleyda: Qaabka Adeegga Duulista Hawada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Diyaaradda Rakaabka ee Airbus oo loo beddelay Gaadiidleyda: Qaabka Adeegga Duulista Hawada
Airlines • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga!
Sine Draco Aviation Development Ltd. Diyaaradda waxaa loo qoondeyn doonaa A321-200 SDF oo leh oggolaanshaha Shahaadada Nooca Dheeraadka ah ee FAA ee la filayo 321-dard rubuc 2022.
Rakaabka Sine Draco A321-200 SDF ee beddelka xamuulka wuxuu siiyaa xalka dhaqaale ee ugu wanaagsan jiilka xiga ee xamuulka qaada.
Beddelidda waxaa ka mid ah rakibidda 142-inji-ballaaran oo 86-inji ah oo ah albaabka xamuulka weyn ee xamuulka, Qeybta weyn ee xamuulka sagxadda oo leh afar iyo toban boos oo weel iyo nidaamka xamuulka Ancra International. Qeybaha xamuulka hoose ayaa sidoo kale qaadi kara toban weel, iyadoo A321 ay tahay nooca ugu horreeya ee diyaarad ee fasalka xamuulka ee cidhiidhiga ah ee leh kartidan.“Kicinta tusaalaha Sine Draco A321-200 SDF ee beddelidda ayaa muhiim u ah barnaamijkeenna,” ayuu yiri Madaxa Sine Draco, Alex Deriugin. “Dhammaan qaybaha waaweyn waxay ku jiraan wax -soo -saarka iyo jadwalka, sawirrada injineernimada iyo dukumiintiyada farsamo waxay ku jiraan marxaladihii ugu dambeeyay ee dhammaystirka, iyo qaybo iyo qalabaynta ayaa maalin walba imanaya xarunta Ascent. Soo -dejinta diyaaradda tusaalaha ah ayaa ah dhammaadka injineernimada Sine Draco, Hawlgallada iyo Kooxaha Kaydka Sahaydu waxay si adag uga shaqeeyaan iskaashi dhow oo lala yeesho wada -hawlgalayaashayada warshadaha. ”Adeegyada Duulimaadyada Ascent waxay fulin doonaan beddelidda diyaaradda iyagoo dhammaystiraya shaqada taabashada, qorshaynta wax -ka -beddelka iyo shuruudaha kormeerka. Jeeg dayactir culus oo qayb ahaan ka mid ah ayaa dhowaan lagu soo gabagabeeyay diyaaradda tusaalaha ah waxaana la dhammaystiri doonaa inta wax laga beddelayo.
Ascent ayaa sidoo kale bixin doonta taageerada dayactirka iyo khadka duulimaadka inta lagu jiro barnaamijka tijaabada dhulka iyo duulimaadka ka dib beddelidda.
Dave Querio, Madaxweynaha iyo Maamulaha Adeegyada Duulimaadyada Duulimaadyada ayaa leh, “soo-gelinta nooca Sine Draco A321-200 SDF ee diyaaradda SDF wajigeeda wax-ka-beddelka ayaa ka tarjumaysa dhammaan shaqada adag ee ay maalin walba bixiyaan khubarada labada Sine Draco iyo Jaranjarada. Waxaan u hambalyeynayaa kooxda Sine Draco oo dhan si ay ula kulmaan dhacdadan muhiimka ah. Dhammaanteen halkaan joogno Ascent waxaa sharaf noo ah inaan qeyb ka noqonno guushaada oo aan ku faraxsanahay inaan u gudubno wajiga xiga ee barnaamijka wax ka beddelka. ”